Kuphazamiseke ukuqoshwa koMuvhango kusolwa umsebenzi ole-corona | uMthunywa
Kuphazamiseke ukuqoshwa koMuvhango kusolwa umsebenzi ole-corona
25 Jun, 2020 - 00:06 2020-06-24T20:23:37+00:00 2020-06-25T00:05:26+00:00 0 Views
Ingxenye yethimba labalingisi bomdlalo wakuSABC, uMuvhango omiswe ukuqopha ngenxa yomunye wabalingisi osolwa ukuthi kungenzeka ukuthi utheleleke ngeCovid-19
KUPHAZAMISEKE ukuphekwa komdlalo wethelevishini, iMuvhango, ngenxa yezinsolo zokuthi omunye wezisebenzi uke wasondelana lomuntu osehaqwe ligcikwane leCovid-19. Ngokutsho kwesitatimende esithunyelwe abezindaba, abadidiyeli balo mdlalo iWord of Mouth
Pictures iphoqelekile ukuthi ikumise ukuqotshwa kweMuvhango kuze kuqonde khona.
Umdidiyeli walo mdlalo okhonjiswa kuSABC 2 phakathi kweviki ngo-9 ebusuku, uHerbert Hadebe, uthe kwenziwe konke ukunciphisa ukuba abasebenzi bahaqeke uma beqopha noma sebeqedile.”
Sibeka phambili ukuphepha kwezisebenzi zonke. Sizolokhu siqaphe isimo.”
Uthe bazoqhubeka lokubambisana labakwaSABC ukugcina imithetho emayelana lokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
Ngenxa yokuqikelela ukuphepha kwababambe iqhaza kulo mdlalo, abalingisi lethimba labadidiyeli bayalelwe ukuba bayogonqa kuze kuqinisekiswe ukuthi baphephile. Ngosizo lwabakwaSABC, kuqalile ukuchelwa kwendawo okuqotshelwa kuyo ngezibulali magciwane njengengxenye yokuqikelela ukuphepha kulo mdlalo.
Mayelana losuku okuzobuyelwa ngalo emsebenzini akukaqinisekiswa kodwa abadidiyeli bathe bazomemezela khona maduze.
Kwenzeka lesi sigameko nje kuMuvhango ngesonto eledlule, kuphazamiseke ukuqopha emdlalweni okhonjiswa kuMzansi Magic naku-1 Magic iThe River ngenxa yokutholakala komunye umsebenzi elegcikwane leCovid-19.